SONATA-CANTATA: အသံတွေ ကြားနေရတယ်
မီးခြစ်ဆံလေး မီးပွင့်သွားပုံက ထင်းနေတာပါပဲလားမသီတာရေ။ မသီတာရေးထာတာဖတ်
မိမှပဲ ကျွန်မရဲ့ မီးခြစ်ဆံလေးလည်း မီးပွင့်ချင်လာတာ။
ဒါနဲ့ သီချင်းခေါင်းစဉ်ကို မသီတာပြောမှသိတော့တယ်။
သီတာရေ.. လောကဇာတ်ခုံပေါ်မှာတော့ ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ တင်ဆက်နေရတာပါပဲ..။ တခါတလေတော့ ဇာတ်လိုက်ပေါ့။ တခါတခါတော့လည်း လူာကမ်းလုပ်ဖို. လိုရင် ၀င်လိုက်ရတာပေါ့။ မီးခြစ်ဆံလေးလည်း ကောင်းတာပါပဲ..။ အဲဒီကကူးပေးလိုက်တဲ့ အလင်းတွေက တလောကလုံး လင်းမသွားနိုင်ဘူး ဘယ်သူ ပြောနိုင်မလဲနော်..။
I like your (Mee Chit San) theory.May I confess that I have never thought of that theory. I heard only the light of candle. But the light of candle comes from the Mee chit san. So the Mee chit san is the origin and then to light the candle, he has to hit his head and burn himself. We all face the disturbances of the enviroment (because we are human), but we have to overcome every disturbances and we have to count ourselves that we are like Mee chit san sometime.
I like your thinking phylosophy. Pls carry on.
ပြောစရာမလိုတော့ပါဘူးနော်…ဒီဘလော့လေးနဲ့ ဒီအရေးတွေက မီးခြစ်ဆံလေးရဲ့ တောက်ပတဲ့ အလင်းပဲပေါ့…
Professional ဖြစ်အောင် သင်ခဲ့ရတဲ့ ဘာသာရပ်ကိုလည်း “တပြည်လုံး သုံးစွဲတဲ့ လျှပ်စစ်မီးတောင်မှ အဖိုနဲ့ အမ နှစ်ကိုယ်တွဲမှ” ဆိုတဲ့ သီချင်းစာသားကိုပဲ မှတ်မိတော့တယ် ဆိုတဲ့နေရာလည်းရောက်ရော....ဘေးနားက ထိုင်နားထောင်နေတဲ့ ကျနော့်မဒမ် ဆီက “ဟယ်...ငါ့လိုဘဲ။ ငါ့လိုဘဲ” ဆိုတဲ့ အသံနဲ့အတူ ရယ်သံတွေ ထွက်လာတယ်။
အလင်းတိုင်များကို တောက်ပသော အလင်းများ ကူးနိုင်ပါစေ..။
“တပြည်လုံး သုံးစွဲတဲ့ လျှပ်စစ်မီးတောင်မှ အဖိုနဲ့ အမ နှစ်ကိုယ်တွဲမှ” ... တဲ့လား..။ :-P